Ogaden News Agency (ONA) – Dhaqdhaqaaq Xoogan oo kasocda UK
Dhaqdhaqaaq Xoogan oo kasocda UK
Posted by Daljir	/ November 11, 2016
Dhagaysi Ka dhacaya Guriga Baarlamaanka UK iyo Jaamacada Birmingham
Jaaliyada Ogadeniya ee Dalka Ingiriiska ayaa waayadanba waday olole xoogan oo Qadiyada Somalida Ogaden kor loogu qaadayo laguna gaadhsiinayo beesha Caalamka. Todobaadkan Soo Socda Waxaa Dalka UK ka dhici Doona shirar iyo dhagysiyo aad u muhiima oo ay kasoo qeyb gali doonaan Xubno aad u badan oo kamida Haayada Sharci Dajinta Dalka UK, Ururada Xuquuql Insaanka iyo Saxaafada Dalka UK.
Labada Maalmood ee Isniinta iyo Talaadada oo ku beegan 14-15 November waxaa lagu qabanaya Dhageysi iyo Shir looga hadlayo Qadiyada Soomalida Ogaden.
Jaamacada Birmingham: Isniin 14/11/2016
Shir ay soo qaabiyeen Ururka Ardeyda Jaamacada Birmingham ee Black and Ethnic Minorities Association ayaa ka dhici doona Jaamacada Birmingham Isniinta 14 November 2015. Kulankan oo looga hadli doono waxyeelada uu ugeystay kheyraadka dabiiciga ah ee ceegaagan dhulka Ogaden waxaa marti Sharaf ku ah Wariyihii Ree Sweden ee Martin Schibbye oo Hada ka hor isaga oo baadhitaan ugu jira Shirkadaha Shidaalka ee Sida sharci darada ah shidaalka raba inay uga soo saaraan Dhulka Ogaden lagu qaban jiray. Halkaas oo Xabad lagu dhuftay isaga iyo Sawir Qaadihii la socday. Waxaana lagu xukumay Xabsi 11 Sano ah isaga oo lagu eedeeyay innuu sharcidaro kusoo galay deegaanka waxaana lagu qaaday kiiska sharciyada Argagaxisada ee u yaala gumeysiga Ethiopia.
Kulankan oo dad aad u badan kasoo qeyb gali doonaan waxa uu bilaaban doona 6pm Galabti. Fadlan isku soo beeg inaad joogtid Jaamacada ugu danbeyn 5:30. Waxi maclumaad ah ka fiirso Ogeysiska Sawirka kore.
Dhageysi Loo qabanayo Qadiyada Ogaden: 15/11/2016
Maalinta Talaadada ee ku beegan 15 November saacada 5 Galabnimo. Dhagaysi looga hadlayo Qadiyada Ogaden ayaa lagu qaban doona Xarunta Guriga Baarlamaanka ee Dalka UK. Waxaana looga hadli doona Tacadiyada kala gadisan ee Xidhagya, dilka, Ciqaabta arxan darada ah iyo dhibaatooyinka badan ee gumeysiga Ethiopia u geysto Shacabka Soomalida Ogaden.
Waxaa ka hadli doona Goobtaas Xubno kamida Baarlamaanka Dalka UK, iyada oo dhageysigan uu marti ku yahay Wariyaha Ree Sweden Martin Scibbye. Wariyahaas oo hada ka hor lagu qabtay dhulka Ogaden loona geystay jidh dil iyo xabsi la isugu daray si sharciga baniaadamka iyo midka u yaala xeerarka Wariyaasha ee aduunka ka baxsan.
Shirkan waxaa kasoo qeyb gali doona Gudiyo kasocda Qeybta Xuquuqul insaanka ee baarlamaanka UK, Gudiga Baarlamaanka UK u qaabilsan Arrimaha Ethiopia iyo Gudiga u qaabilsan Baarlamaanka UK dunida 3aad.
Kulankan waxaa siwada jira u qabanqaabiyay Jaaliyada Ogaden Community UK, Ururo Xuquuqul Insaan oo bah wadaag ah oo ka dhisan dalkan UK iyo All Party Parliamentary Group on Third World Solidarity.
Sawirkan hoose ka fiirso Macluumaadka shirkan.
Jaaliyada Ogadeniya ee UK ayaa baryahan danbeba waday olole qadiyada Soomalida Ogaden lagu gaadhsiinayo Beesha Caalamka, iyaga oo horey u qabtay Shirar ay kasoo qeyb galeen Xubno kamida Baarlamaanka UK 1 October 2016, waxaa ku xigay Shirar Wada tashi ah oo ururka haweenka Ogaden qabteen 22 Ocotober, iyo Shir lagu qabtyay Magaalada Manchester 23 October. Banaanbaxweyn oo ay ku qabteen Guriga Baarlamaanka UK 26 October 2016 halkaas oo wasiiro kamida Dowlada UK jaaliyadu kula kulantay. Kulamadan October iyo November lagula kulmay dowlada UK waxaa kale oo garab socday dhaqdhaqaaqyo kale oo ay kamid ahaayeen Jaaliyada Ogaden oo ka qeyb gashay Dhageysi Qadiyada Oromada loogu sameynayay Guriga Baarlamaanka Midowga Europe iyo Banaanbaxyo Jaaliyada Oromada ay qabatay Sida hoos aad ku arki doontaan kuwaas oo dhaca 9-10 November 2016.
sawiradii Banaanbaxa iyo kulankii EU
Jaaliyada Ogadeniya ee UK ayaa horey u diyaarisay Filimaan Looga Hadlayo Qadiyada Soomalida Ogaden kuwaas oo lagusoo bandhigay Bishii September magaalada London Carwada layiraahdo London Gallery iyo Portobello Film Festival. Filimadan ayaa dhowaan markale lagu qaban doona Jaamacadaha Dalka UK bisha Soosocta haduu Allaah raali ka noqdo.